FAAQIDAADA CAYAARAHA – Africa Sports Network
Category Archive: FAAQIDAADA CAYAARAHA
Jul 20, 2016 Tajuddin FAAQIDAADA CAYAARAHA 0
Muqdisho, Soomaaliya ( AFRICASPORTS.NET) – Sport waxaa loo qabtaa si loo dhiirri geliyo isdhexgalka bulshada. Waxaa shaqo loogu abuuraa cayaartooyda, macallimiinta iyo tababbarayaasha, Madaxda...
Zinedine Zidane , Tababarihii seddexaad ee Real Madrid ee guul ka gaara sanadka koowaad ee El Clasico.
Apr 03, 2016 Tajuddin FAAQIDAADA CAYAARAHA 0
Madrid, Spain ( AFRICASPORTS.NET) – Cayaartii maanta waxa ay siisay Real Madrid guul uu xaqiijiyay xidigeeda Cristiano Ronaldo oo gooshii labaad laaday . Cayaartii maanta , waxa ay huwaneyd...
Mar 09, 2016 Tajuddin FAAQIDAADA CAYAARAHA 0
Muqdisho,Soomaaliya ( AFRICASPORTS.NET) – Xidigtii Kubada Koleyga Soomaaliya ee Barisamaadkii Astur Jeenyo Magaceeda oo seddexan waa Astur Jaamac Cilmi,waxa ay ku dhalatay Degmada Gaalkacyo ee...
Mar 08, 2016 Tajuddin FAAQIDAADA CAYAARAHA 0
Muqdisho,Soomaaliya ( AFRICASPORTS.NET) – Sida la ogsoon yahay da’ kasta oo ay bulshada caalamka leedahay haddey ahaan lahaayeen caruur ama ciroole, dhallinyaro ama duqoow (waayeel),...
Allah u naxariisto Faarax Weheliye Cadow ( Sendiko) , waxa uu leeyahay taariikh dheer oo sport oo ah midda Soomaaliya. Marxuum Sindiko wuxuu muddo aad u dheer ahaa gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta...
Allaha u naxriistee Gudoomiyihii Guddiga Olombikada Soomaaliyeed Aadan Xaaji Yabarow waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1947-dii. waxa uu yaraantiisii ahaa mid waxbarashada aad...
Cabdulle Nuur Waasuge waxa uu ku dhashey magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sanadkii 1941-kii, yaraantiisii wuxuu jeclaa guud ahaan ciyaaraha gaar ahaan Kubadda...
Cabdi Bile Cabdi waxaa uu dhashay 28-kii December 1962-kii, waxa uu ku dhashay magaalada Laas-caanood oo ka tirsan gobalka sool. Cabdi Bile Cabdi waxaa uu noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo...
Waxaa xusid mudan in uu Koobka Horyaalka Soomaaliya uu hadda si darandoori ah uga socdo caasimadda Muqdisho. Bahda Africa Sports Network ( Shabakadda Africa Sports) ayaa haddaba idinla soo socodsiin...
Taariikhda Sport ee dalka Soomaaliya ( Qeybta Labaad) Dhammaad
Muqdisho,Soomaaliya ( AFRICASPORTS.NET) iyadoo horey idin kugu soo gudbinay qeybta 1-aad ee Taariikhda ciyaaraha Soomaaliya,gaar ahaan xiriirada kubadda cagta iyo Koleyga,ayaa waxaa aan qeybtan...